Layma's World: သိခဲ့ရဲ့လား….
“ လူတစ်ယောက်ကို ဘယ်တုန်းက စချစ်သွားခဲ့သလဲလို့အတိအကျ မသိဘူးဆိုတဲ့လူတွေကို ကျွန်တော်တော့ အံ့သြတယ် ” စာမျက်နှာ ၁၉၉ (ချစ်သူလား…စကားတစ်ပွင့် ပွင့်ခဲ့တယ် - ဂျူး)
Labels: Poem, Thinkings from novels, Wondering
ဟုတ်လိမ့်မယ် ဂျူပြောတာ ... ချစ်သူတို့မှာ ကိုယ်ချစ်တဲ့ သူကို ဘယ်လိုချစ်ခဲ့မှန်မသိလို့လား မသိယောင်ဆောင်ခဲ့တာလားတော့ မသိဘူး .. အခုတော့ တော်တော် ထိတယ် ... ပြောရမှာ ရှက်တာလဲ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ် ..
ဒါကို သဘောကျသဗျာ ...
ပုစ္ဆာတွေ ရှင်းဖို့ ... တွေးခြင်းတွေက စတယ် ...
ပုစ္ဆာ တွေ ကလည်း အများသားလားဗျ ...
အဲတော့ အတွေးတွေ စဖို့ ထိုင် ရင်း ၊ ငိုင်ရင်း ၊ ငေးရင်းနဲ့ ငိုက်လာပါလေရော ...
ဆိုတော့ ... အိပ်ပျော်သွားသည်ပေါ့ ... အဟီး ... နိုးလာတဲ့ အခါမှာတော့
သိခြင်း ၊ မသိခြင်း တွေ ကို အဖြေရသွားတယ် ... ငါမသိတာတွေ အများကြီးပါလား လို့ သိလိုက်ရတော့တာပဲ ...
အဲဒါနဲ့ ပြန်အိပ်ပစ်လိုက်တာပေါ့ ... အဟဲ ...
တခါတုန်းဆီက ........... အင်း ... ဂလိုပေါ့ဂျာ ... :D
ဆရာမ ဂျူး ပြောတာ ဟုတ်တော့ ဟုတ်တယ်ဗျ ...
ဒါပေမဲ့ ... အင်း ... အဲသဟာလည်း ... ဂလိုပေါ့ဂျာ ... XD
ကိုယ်မသိတဲ့ ကိစ္စတွေမှာ အဲသလို ဂလိုပေါ့ဂျာ ဆိုပြီး လျှောချလိုက်တယ် .. အဟဲ ...
"You have No Extra Time" ဆိုတာတော့ ကြိုက်တယ်ဗျာ ... ဟုတ်တယ် ..
ဘယ်ကိစ္စ ဘယ်နေရာမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လက်ရှိ ပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ အချိန်ဟာ အကောင်းဆုံးပဲ ...
အဲဒီအချိန်မှာ အကောင်းဆုံး လုပ်ကြရမှာပဲ ... အချိန်ပိုတွေ မျှော်လင့်နေလို့ မရဘူး ... ဘ၀ ဆိုတာ .....
ဂလိုပေါ့ဂျာ ... >:)
ကိုချစ်သူ…..အရင်က မသိခဲ့တာတွေ…မပြောဖြစ်ခဲ့တာတွေ… နောက်ဆိုသိအောင်…ပြောဖြစ်အောင် လုပ်ပေ့ါနော်….
ဂျယ်ရီ…..အဲလို လျှောချတတ်ရင် ဟို နေရာမှာ သွားထိုင်လို့ ရပြီ…. သိပ်ကြောက်သွားလား….ဟား..ဟား….မင်းကွန်းခေါင်းလောင်းကြီးနားမှာလို့ပြောတာပါ…..လေးမ လဲထိုင်နေတယ်….ဘိုးဘိုးဦးပေါ်ဦးနဲ့ တွေ့ မလို့ ။ မိုက်တယ်ကွာ….မသိတာတွေ အများကြီးပဲဆိုတာ သိသွားတော့ ပြန်အိပ်လိုက်သတဲ့…..တော်တယ်…..အဲလိုပဲဖြစ်နေရမယ်…..